Eternal Bliss: दलाई लामा र ६ सभासद भेट
Exiled Tibetan spiritual leader Dalai Lama (Centre) poses foraphotograph with Nepali lawmakers at Dharamshala, India recently. China has expressed deep concerns over the meeting between the Madhesi lawmakers and Lama.
चीनद्वारा गम्भीर चासो
देवेन्द्र भट्टराई/सरोजराज अधिकारी
काठमाडौं, चार दलका छ सभासदले हालै तिब्बती धार्मिक नेता दलाई लामालाई भेटेको घटनाप्रति चीनले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ । 'एक चीन नीति' को पक्षधर रहेको सरकारमा सामेल दलसहितका सभासदले असार ७ गते लामालाई भारतको धर्मशालामै गएर भेटेका थिए ।
मधेसी फोरमका सभासद बीपी यादवको नेतृत्वमा गएको सभासद टोलीमा फोरमकै राजकिशोर यादव, आशाकुमारी सरदार, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका ईश्वरदयाल मिश्र, दलित जनजाति पार्टीका विश्वेन्द्र पासवान र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी रुक्मिणी चौधरी थिए । भ्रमणको व्यवस्थापन लुम्बिनी फाउन्डेसनले गरेको थियो ।
काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासकी उपप्रमुख सी ह्वीले शुक्रबार परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई भेटी सभासद भ्रमणबारे गम्भीर चासो राखेकी थिइन् । उनले चीन महाशाखा हेर्ने सहसचिव मोहनकृष्ण श्रेष्ठसँग आफ्नो सरकारको धारणा राखेकी थिइन् । परराष्ट्रले गृह मन्त्रालय र संसद सचिवालयसँग समन्वय राख्दै 'एक चीन नीति' बारे अवगत गराउन सम्बद्ध दलहरूलाई पत्र लेख्ने भएको छ ।
लामालाई भेटेको सूचना पाएर बुधबार एकाएक काठमाडौं आएका पूर्वचिनियाँ राजदूत झाङ जियुहानले पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनले प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइराला र परराष्ट्रसचिव ज्ञानचन्द्र आचार्यलाई भेटेर 'नेपालबाट भइरहेको चीनविरोधी गतिविधि' बारे चासो राखेका थिए ।
दलाई लामासँग सत्तारूढ सांसदहरूसमेतको भेटसम्बन्धी खबर सुनेपछि प्रधानमन्त्री नेपाल र सम्बन्धित दलका शीर्ष नेता 'आश्चर्यचकित' भएको स्रोतहरूले बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीले केही सभासदलाई निवासमै बोलाएर आपत्ति जनाएको र त्यसक्रममा चिनियाँ राजदूत क्यु गोहाङ बालुवाटारमै रहेको मञ्चका अर्का सभासद राजकुमार लिम्बूले कान्तिपुरलाई बताए ।
'हामीले नागाल्यान्डमा विद्रोहरत पक्षसँग हात मिलाउँदा भारतलाई कति चित्त दुख्छ, दलाई लामालाई भेट्दा चीनलाई त्यस्तै हुन्छ । हाम्रा लागि दुवै छिमेकी बराबर हुन् । तपाईंहरूले ख्याती श्रेष्ठका अभियुक्त वीरेन श्रेष्ठसँग हात मिलाएजस्तै अपराध गनर्ुभएको छ, सच्याउनुहोस्,' लिम्बूले प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गरे ।
फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भेटबारे पार्टीलाई कुनै जानकारी नभएको र पुष्टि भएमा सभासदहरूसँग स्पष्टीकरण सोधिने बताए । 'हामी तिब्बतलाई चीनकै अंग मान्छांै । एक चीन नीतिको पक्षमा छौं । चीनविरोधी त्यस्ता क्रियाकलाप हामीलाई सह्य छैन,' उनले भने । तमलोपाका उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले पनि आफ्नो पार्टी एक चीन नीतिको पक्षमा अडिग रहेको बताए ।
'दयालजीको भेटले पार्टीलाई प्रतिनिधित्व गर्दैन,' त्रिपाठीले भने । मञ्चका लिम्बूले आफ्नो पार्टीकी सभासद चौधरीलाई दिल्लीसम्म जाने भनेर झुक्याएर धर्मशाला लगिएको बताए । फोरम सभासद सरदारले पनि बीपी यादवले दिल्लीसम्म भनेर धर्मशाला पुर्‍याएको बताइन् ।
'गाउँमै थिएँ, बीपीजीले अचानक दिल्ली जानुपर्छ भनेर बोलाउनुभयो । धर्मशाला जाने जानकारी नै थिएन,' उनले भनिन् । सरदारका अनुसार लामाले 'चीनले तिब्बतमा दमन गरेको' बेलिबिस्तार लगाएर 'स्वतन्त्र तिब्बत' अभियानमा सघाउन आग्रह गरेका थिए ।
सभासद बीपी यादवका अनुसार भेटमा लामाले आफ्नो आन्दोलनलाई समर्थन गर्न, तिब्बती शरणार्थीलाई पनि भुटानीलाई जस्तै सम्मान तथा उचित व्यवस्थाका लागि नेपाल सरकारलाई घच्घच्याइदिन आग्रह गरेका थिए । साथै लामाले नेपालस्थित आफ्नो कार्यालय निर्बाध सञ्चालनको वातावरण तयार पार्न आग्रह गरेको र आफूले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई भेटेर पहल गरिदिने आश्वासन दिएको यादवले बताए ।
'यसै साताभित्र निर्वासित तिब्बती संसदको टोली सम्भवतः सभामुखकै नेतृत्वमा नेपाल आउँदैछ । उहाँहरूलाई प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसँग भेट गराउँछु,' फोरम नेता यादवले भने । आफूले लामा र कर्मापालाई पनि नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएको उनले बताए ।
दुई साता लामो भारत भ्रमणका क्रममा आफूहरूले जसवन्त सिंह, शरद यादवलगायतका नेतालाई भेटेको र भारतका पूर्वरक्षामन्त्री जर्ज फर्नान्डिज त दलाई लामासँगको 'डिनर' मा आफूहरूसँगै रहेको यादवले बताए ।
धर्मशालामा जाने टोलीमा कांग्रेस सभासद किरण यादव पनि जाने टुंगो भएकामा बीचमा संसदीय दलको चुनाव परेकाले नगएको बीपी यादवले बताए ।
प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईले भौगोलिक बनावटको संवेदनशीलतालाई बुझेर सभासदजस्ता जिम्मेवार व्यक्तिहरूले दलाई लामालाई त्यसरी भेट्नु गलत भएको बताए ।
'नेपालको भूमि चीनविरुद्ध प्रयोग गर्ने विषय प्रधानमन्त्री, सरकार र मुलुककै लागि गलत छ,' उनले भने । लामाको जन्मोत्सवका अवसर पारेर यहाँ हुनसक्ने तिब्बती प्रदर्शनप्रति सचेत रहन सुरक्षा निकायलाई प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिइसकेको समेत भट्टराईले स्पष्ट पारे ।
'उहाँ -लामा) को जन्मोत्सवमा मलाई हरेक वर्ष निमन्त्रणा आउँछ । यसपाला बौद्धिक र धार्मिक नेताको आशीर्वाद लिने समूहमा माननीय सांसदहरू पनि पनर्ुभएको हो । यसरी संसदीय डेलिगेसन टिम लिएर धर्मशाला गएको यो पहिलोपटक हो,' कार्यक्रमका संयोजक लुम्बिनी फाउन्डेसनका सिद्धार्थ गौतमले कान्तिपुरसँग भने ।
नेता लामालाई भगवान बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी भ्रमणको मौखिक आमन्त्रण पनि गरेको उनले जानकारी दिए । लामा यसअघि सन् १९८३ मा लुम्बिनी आएका थिए । लामालाई मात्रै नभएर चिनियाँ राष्ट्रपति हु जिन्ताओलाई पनि लुम्बिनी भ्रमणमा आमन्त्रण गरेकाले यसलाई 'अन्यथा' रूपमा नलिन गौतमले आग्रह गरे ।
सभासद बीपी यादवले थपे, 'हाम्रो काठमाडौं केन्दि्रत राजनीति होइन, यसकारण स्वतन्त्रता र अधिकारबारे बोल्दैमा डराउनु पर्दैन ।' नेता दलाई लामाले जसरी चीनभित्र स्वायत्त तिब्बतको कुरा उठाएका छन्, त्यसैगरी मधेसवादी दल र नेताले नेपालभित्र 'स्वायत्त मधेस' को मुद्दा उठाएकाले यही चासो सुन्ने/सुनाउने अवसर आफूहरूले पाएको दाबी यादवले गरे ।
Posted on: 2009-07-04 20:29:50
Posted by Happiness Seeker at 4:03 AM
Labels: madhesi leaders meet dalai lama